OTU ESI EMEPUTA NETWỌK NA HAMACHI - HAMACHI - 2019
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nke saịtị VKontakte na-aghọ ntakịrị setịpụ nke ọchị na akwụkwọ mmado, n'ihi nke ọ dị mkpa ịchọpụta ngwọta maka nsogbu a. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu ị ga-esi gbanye ihe emoji nke ọma, na-eme ka ọchị nke ọtụtụ ndị ọzọ na-amụmụ ọnụ ọchị.
Anyị na-eme ka ọnụ ọchị si ọchị ọchị
N'ezie, ị nwere ike dozie nsogbu a na-enweghị nsogbu ọ bụla pụrụ iche na ntụziaka pụrụ iche, ịnweta nhazi nke emoji. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume ịghara ikwere na ụdị ihe a chọrọ oge buru ibu iji mepụta ihu ọchị dị elu.
N'ihi atụmatụ a, anyị na-atụ aro ka ị jiri ọrụ pụrụ iche vEmoji, nke na-enye gị ohere ngwa ngwa na n'enweghị nsogbu ọ bụla nwere ike ịmepụta ihe osise zuru ezu site na emoji VK.
Gaa na weebụsaịtị vEmoji
Biko mara na anyị emetụla ike nke ọrụ a na isiokwu dị na weebụsaịtị anyị. A na-atụ aro ka ị mara onwe gị na ha ka ịchọta azịza nke ajụjụ ndị nwere ike ibilite n'oge ọrụ nke vEmoji.
Ziri ezoro ezo VK
Usoro na ụkpụrụ smk VK
Rịba ama na ọbụlagodi na nnukwu ọrụ nke ọrụ ahụ na-enye, a na-atụ aro ka ị jiri emoji emoticons naanị mgbe ọ dị mkpa. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ihe oyiyi dị otú ahụ agaghị egosipụta n'ụzọ ziri ezi maka ndị ọrụ dị iche iche.
Mepee isi peeji nke weebụsaịtị vEmoji, n'agbanyeghị na ịchọrọ ihe nchọgharị weebụ.
Iji menu mbu, gbanye na taabụ "Onye na-ewu ụlọ".
N'ihi otu panel pụrụ iche na edemede, họrọ ndị igwe-oji ịchọrọ.
N'elu aka nri nke ihuenyo ahụ, dozie ogo nke ala ahụ na ọnụ ọgụgụ nke emoji na ị ga-abanye na otu nhazi ma ọ bụ ntanetị.
N'ime ndepụta ndị emoticons dị n'akụkụ aka ekpe nke ibe ahụ, pịa emoticon nke ga-abụ brush gị.
Jupụta mkpụrụ ndụ na mkpụrụ ndụ na emoticons ka ha wee mepụta ụkpụrụ ị chọrọ.
Ị nwere ike jupụta na mkpụrụ ndụ efu, na-eme dị ka ndabere, na ụdị ọ bụla nke emoji, site na ịhọrọ emoticon na ịtọ ya n'ọhịa "Ezube".
Iji ngwa ngwa wepu nzụlite, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri njikọ ahụ "Kagbuo".
N'okpuru ala nke ọma na ịmụmụ ọnụ ọchị ọchị, ị nwere ike iji atọ njikọ ọzọ na-enye njirimara kwekọrọ.
Eraser - na-enye gị ohere ihicha mkpụrụ ndụ ndị ahụ emoji gara aga.
Njikọ - na - enye gị URL pụrụ iche na mkpuchi e mepụtara;
Kpochapụ - wepu ihe niile e kere eke.
N'ọkụkụ ikpeazụ e nyere bụ koodu nke onyinyo ahụ e kere eke site na Emoji. Iji detuo ya, pịa bọtịnụ ahụ. "Detuo"dị na mpaghara nke kọlụm a kapịrị ọnụ.
I nwekwara ike iji ụzọ mkpirisi keyboard "Ctrl C".
Na mgbakwunye na njirimara ndị a, a na-enye gị ọtụtụ isi iyi ihe oyiyi ị nwere ike iji dịka isi maka emoticon emoji gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, imepụta ọchị ọchị site na ọnụ ọchị adịghị mfe.
Anyị na-eji ihe ndị e mere ka ọ dị mma site na ọchị
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmepụta emoticons si emoji maka VK maka ihe ọ bụla, ịnwere ike iji mpaghara ahụ na-ese foto.
Site na nchịkọta nhọrọ menu gaa na taabụ "Foto".
Iji ndepụta nke edemede, họrọ isiokwu nke foto ndị ị nwere mmasị na emoticons.
Leba anya na ntụziaka maka iji foto dị n'akụkụ aka nri nke menu na edemede.
N'ime foto ndị dị na ya, họrọ otu nke na-emezu ihe ị chọrọ, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Detuo".
Ọ bụrụ na ịchọrọ foto ahụ dum, ma ịchọrọ ịhazigharị ihe tupu ị jiri ya, jiri bọtịnụ ahụ "Dezie".
Mgbe i mechachara aro ndị ahụ, ị ​​ga-enweta ihe ngwọta Ọ bụrụ na ịnwe ajụjụ, anyị dị njikere mgbe niile inyere gị aka.